ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ ပြောချင်တယ် ... ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်” (ရုပ်သံ)
“ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ ပြောချင်တယ် ... ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ တွေ့ချင်တယ်” (ရုပ်သံ)
ချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ ၀က်မှေးကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို
ပခုက္ကူ၊ မန္တလေးနဲ့ မုံရွာမြို့က သံဃာအားနဲ့ ပြန်ဖွင့် (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:11 PM
alinka maung said...
သံဃာ့နာယက အဆင့်ကလဲနေရာတိုင်းမှာ မျက်စိကျတဲ့ကျောင်းတွေကို ပျဿနာ အမျိုးမျိုးရှာ အတုအယောင်ချိတ်ပိတ် နားမလည်လို့ငြိမ်နေရင် သူတို့တပည့်တွေထား လုပ်နေကြတယ်။ အလားတူပြဿနာမျိုးတွေ ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ်က သံဃာတော်များခံစားနေရတယ်။လက်ရှိမှော်အင်းကျောင်းက အဆိုးဆုံးပဲ။သံဃနာယကတွေ ငွေလဲယူကျောင်းလဲ ယူမည့်စီမံကိန်းဖြစ်နေတယ်။
Amay Daw Aung San Suu Kyi and Ko Min Ko Naing!
Please help the people as you are the only persons who can save our country including those people.
လက်ပံတောင်းတောင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပင်ပမ်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်၊ ရေမရောတဲ့ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေပါ။ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ရေ၊ ကိုယ့်လေပေါ်မှာ နေထိုင်ရင်း ကိုလိုနီနယ်ပယ်တွေလို ပြုကျင့်ခံနေရတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀ဒုက္ခတွေအပေါ် ဘာကြောင့်များ မြန်မာစစ်တပ်၊ မြန်မာအစိုးရက နားမလည်ပေးနိုင်ရတာလဲဗျာ။ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်တို့က မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခတွေအပေါ် နေ့ပေါင်း၊ လပေါင်းများစွာ လှစ်လျူရှုနေနိုင်တာ အံ့သြ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ မျိုးချစ်တပ်မတော်၊ မျိုးချစ်အစိုးရတွေ မြင်ချင် တွေ့ချင်လှပါပြီ။
ထိုသို့ သောပြည်သူများ အပါအ၀င်
ကျေးဇူးပြုရ်ျ ကယ်တင်ပါ။
ကျေးဇူးပြုရ်ျ ကယ်တင်ပါ!!!!!
" ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ ပြောချင်တယ်..
ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ တွေ့ ချင်တယ် "
အမေစုကပြောတယ် ကတိပေးပြီးရင် တည်ရတယ်တဲ့။